Udutshulwe wafa usomabhizinisi odumile - Ilanga News
Home Izindaba Udutshulwe wafa usomabhizinisi odumile
Udutshulwe wafa usomabhizinisi odumile
Kuthiwa ubulawa nje, ubegqigqa inkantolo ngecala lesehlukaniso
UMNU Derrick Manhique odutshulwe wabulawa ngentululwane yezinhlamvu ngo-Lwesihlanu emini ephuma enkantolo ngecala lesehlukaniso. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UDUTSHULWE wabulawa nomabhalane wakhe umnikazi wenkampani yamakha-za edumile KwaZulu-Natal, kungakapheli sikhathi esingakanani kade ephuma enkantolo ngodaba lokwehlukanisa nomkakhe ngoLwe-sihlanu.
Kubikwa ukuthi uMnu Derrick Manhique (52) we-Igoda Funeral Sevices, uhlaselwe ngamadoda amathathu angaziwa eme noNkz Busiswa Zulu (35) ongumabhalane wakhe, ngaphandle kwamahhovisi abasebenzela kuwona kwaP, KwaMashu.
ILANGA lithole ukuthi babulawa nje, uMnu Manhique ubevele ebu-thaka empilweni, ubephume lapho ahlala khona ngoba eya enkantolo.
ILANGA likhulume nomthombo walo osondelene kakhulu noMnu Manhique othe ubulawa nje, isimo bese singesihle phakathi kwakhe nelungu lomndeni wakhe esingeke silidalule ngenxa yezizathu zomthe-tho, sebeyisane nasezinkantolo.
Ngokusho komthombo, kuqhamuka abesilisa abathathu behlome ngezibhamu, bavulela ngenhlamvu kuMnu Manhique esakhuluma noNkz Zulu ngezinto ezithinta umsebenzi.
“Bamdubule amahlandla angaphezu kwawu-6 washonela endaweni yesigameko. Badubule nomabhalane wakhe maqede bashaya bachitha be-ngathathanga lutho.
Umthombo uveze ukuthi uMnu Manhique ubulawa nje, uke wahlala esitokisini izinyanga eziwu-4 ngonyaka ophelile engayitholi ibheyili emuva kokusolwa ngokushaya umkakhe ngesidunu sesibhamu esingekho emthethweni. Kuthiwa wavulelwa icala ngalokho zabe seziyamkhalela.
“Ngigcine ukukhuluma naye ngo-Lwesibili, engixoxela ukuthi akaphi-lile, usehlale ezivalele endlini uphuma ngoba eya kodokotela.
“NgoLwesihlanu ubephume ngoba eya enkantolo, ngisho emsebenzini ubengasajwayele,” kusho umthombo.
ILANGA likhulume nendodana kamufi, uMnu Sandile Khanyile, ethe impela uyise ubulawa nje ube-ngaphilile futhi ubebhekene nezi-nkinga emndenini wakhe.
“Kanginalo ulwazi oluningi ngo-kwenzekile ngesikhathi ehlaselwa ngoba nami bengingekho kanti nabantu abadala kabekho,” usho uMnu Khanyile.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa aphenya amacala amabili okubulala, bekungakabo-shwa muntu.
Previous articleIChiefs nonyawo lwedada
Next articleUlaxaze umsebenzi ‘odlwengule’ isiguli